सोमबार यी काम गर्नूस्, फलिफाप हुनेछ ! - Sawal Nepal
काठमाडौँ सवालनेपाल २०७७ चैत्र ३०, ११:५०
प्राचिन युग देखि नै सोमबार भगवान शिव (भोलेनाथ) सँग जोडिएको छ । प्राचिन मान्यता अनुसार सोमबारको दिन व्रत बस्ने र पूजा गर्ने गर्नाले मनोकंक्षा पूरा हुने विस्वास गरिन्छ । सोमबारको दिन सामान्यतया धेरै महिलाहरु व्रत बस्ने गर्दछन् । विवाहितले महिलाले पतिको दीर्घायुको तथा अविवाहित युवतीले सुयोग्य बरको कामना भगवान शिवको पूजा आरधाना गर्ने गरिन्छ ।
सोमबारको दिन यी कामहरु गर्नुहोस् :
-सोमबारलाई भगवान शिवको दिन अर्थात चन्द्रमाका दिनका रुपमा लिइन्छ। यस दिन विहान सवेरै उठेर भगवान शिवको दर्शन गरी शिव चालीसा या शिवाष्टकको पाठ गर्नाले भगवान शिव प्रसन्न भइ समस्या समाधान हुने विश्वास गरिन्छ ।
-बिहानै बेलपत्रमा सेतो चन्दनको टीका बनाएर शिवलिंगको पूजा गर्नाले पनि फलिफाप हुन्छ ।
-‘ॐ नमो धनदाय स्वाहा’ मन्त्र कुनै शिव मन्दिरमा गएर रुद्राक्षको मालाले ११ पटक जप गर्नाले धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ ।
-सोमबारका दिन आफ्नो पायक पर्ने शिव मन्दिरमा पुगेर शिवलिंगमा दूध चढाउने । उक्त दूध तामाको भाडामा ल्याएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेको ठाउँमा पूर्ण श्रद्धाका साथ छर्किदै ‘ॐ नमः शिवायः’ मन्त्रको जप गर्नाले व्यवसायमा श्रीवृद्धि हुने मान्यता राखिन्छ ।
-दाम्पत्य जीवनमा आउने उतार चढाव वा समस्या समाधानको लागि सोमबारको विहान सबेरै गौरी–शंकरलाई मनन गरी रुद्राक्ष शिव भगवानलाई अर्पर्ण गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने विश्वास छ ।
शिशु जन्मेदेखि ३ वर्षसम्म के खुवाउने ?
सपनामा देखिएका यी ५ दृश्य खतराको संकेत